Waa Maxay B2C CRM ugu Wanaagsan ee Ganacsigaaga Yar? | Martech Zone
Xiriirka macaamiisha wuxuu soo maray wado fog tan iyo markii la aasaasay. Caqliga B2C (Ganacsi Macaamiil) ayaa sidoo kale u wareegay maskax badan UX-xuddun halkii laga bixin lahaa sheyga ugu dambeeya. Doorashada saxda ah softiweerka maareynta xiriirka macaamiisha ee ganacsigaaga ayaa noqon kara khiyaano.
Sida laga soo xigtay daraasadaha, 87% ganacsiyada waxay si firfircoon u isticmaalaan CRMs ku saleysan daruuriga.
18 CRM Istaatistikada Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato 2020 (Iyo Wixii Ka Sii Dhereeya)
Iyada oo ay jiraan fursado badan oo aad haysato, waxay noqon kartaa mid aad u culus oo walwal leh in la xusho midka saxda ah. Aynu jaleecno tusaalooyin xusid mudan iyo sida aad ugu dooran kartid aaladda saxda ah ee baahidaada ganacsi yar.
Sida loo Xulo CRM
Kahor intaanan guda gelin, waxaa muhiim ah in xoogaa dejin lagu sameeyo dhagxaanta. Ugu horreyntii, ma jiraan laba qalab CRM oo isku mid ah - mid waliba wuxuu leeyahay xulashooyin u gaar ah.
Doorashada midda saxda ah waxaa badanaa lagu sameeyaa is-milicsi dhanka shirkadda ah, badanaa waxa aad u baahan tahay. Inkasta oo shirkadaha qaar ay mudnaanta siiyaan iibinta, kuwa kale waxay doorbidaan raadraac iyo falanqeyn faahfaahsan. Xaqiijinta CRM waxay sidoo kale saameyn togan ku yeelan doontaa istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabahaaga, taasoo kuu suurta gelin doonta inaad aragto nooca maaddada soo saarta hoggaanno badan. Aynu eegno qaar ka mid ah su'aalaha kaa caawin kara inaad go'aamiso CRM-ka ugu fiican ganacsigaaga:
Intee ayey weyntahay ganacsigaagu?
Ma ka shaqaysaa heer caalami ama gudaha?
Immisa xubnood oo shaqaale ah ayaad leedahay oo waad ballaadhinaysaa?
Xog intee le'eg ayaad ka baaraandegtaa maalin kasta oo ay sii ballaaraysaa?
Waxqabadka farsamada ee ganacsigaaga
Waa maxay noocyada xirfadlayaal ah ee aad ku leedahay liiskaaga mushaarka
Ma haysaa falanqeeyayaasha xogta iyo kuwa wax iibiya?
Sidee otomaatig u yihiin taageeradaada macaamiisha iyo habka iibinta?
Maxay yihiin ahmiyadaadu markay tahay qanacsanaanta macaamiisha?
Immisa ayaad maalgashi ku sameysaa suuqgeynta iyo xayeysiinta?
Sidee ayaa loo socodsiiyay socodkaaga shaqada oo ma jiraan wax culeysyo ah?
55% milkiilayaasha meheraddu waxay weydiistaan ​​fududeynta adeegsigooda CRM wax walba oo ka sarreeya.
12 Jaantusyo Cajiib ah oo CRM ah oo aadan rabin inaad weydo
Markaad ka jawaabto dhammaan su'aalahan, waxaad yeelan doontaa sawir cad oo ujeeddo leh oo ah waxa aad u baahan tahay. Way fududahay in si khaldan loo xisaabiyo oo la doorto CRM oo aan adiga kugu habboonayn, oo kaliya gadaal gadaal loo dhigo mid kale oo dambe. Hadda oo aan faham wanaagsan ka haysanno doorashada saxda ah CRM, aan eegno tusaalooyinka ugu caansan.
Haddii aad raadineyso maamul wanaagsan iyo jadwal jadwalka CRM, Agile CRM ma dabooshay. Qalabku wuxuu ku faanaa in badan oo otomaatiga ah iyo xulashooyinka maaraynta xiriirka ah oo u hagaajin kara maamulka xiriirka macaamiisha warqadda.
Waxaa si gaar ah loogu talagalay iyada oo ganacsiyada yaryar maskaxda lagu hayo waxaana ka maqan xulashooyin ganacsi oo waaweyn oo aad caadi ahaan ka heli lahayd CRMs. Si kastaba ha noqotee, Agile CRM waxay la timaaddaa taageero buuxda oo loogu talagalay plugins iyo widget taas oo macnaheedu yahay inaad u habeyn karto si ay ugu habboonaato baahidaada ganacsi si dhammaystiran.
Booqo Agile CRM
Haddii aad raadineyso CRM iibka udub dhexaad u ah ganacsigaaga, ha uga fogaan Pipedrive. Adeeggan waxaa si gaar ah loogu qaabeeyey iibinta oo si toos ah uga socota xarunta, taas oo macnaheedu yahay inay ku soo raran yihiin xulashooyin iib gaar ah oo fara badan.
Naqshadeynta qaabdhismeedka jilicsan iyo UI jiido-iyo-hoos u dhac waxay hubineysaa in kooxdaadu leedahay deg deg deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo oo ay kula shaqeeyaan. Pipedrive xitaa waxay u oggolaaneysaa isdhexgalka emaylka taas oo macnaheedu yahay in kooxdaada iibka aysan ku qasbanaan inay ku badiyo badan tabyo kala duwan oo ay si fudud diiradda u saaraan shaqadooda.
Copper (si rasmi ah Prosperworks) waa CRM leh isugeyn buuxda oo Google ah. Tani waxay ka dhigan tahay in adeeggu la jaan qaadayo dhammaan barnaamijyada iyo aaladaha laga helo Google, oo ay ku jiraan Drive, Waraaqaha, iyo Docs.
Maxaa kala bixiya Copper-ka iyo CRM-yada kale waa iswaafajinta VoIP ee ku soo biirtay adeegga.
Amari Mellor, Wakiilka Adeegga Macaamiisha Sare Grabmyessay
Tani waxay u oggolaaneysaa maamulayaasha iibintaada iyo taageerada macaamiisha inay la falgalaan kuwa soo wacaya iyo dhinacyada saddexaad iyadoon qalabkaas laftiisa laga bixin. Waxay duubtaa oo kaydisaa wada sheekaysiga codka falanqaynta dambe waxayna kuu oggolaaneysaa inaad kaydiso oo aad wax ka beddesho xogta muhiimka ah tooska Google lafteeda. Copper waa mid ka mid ah muuqaallada buuxa ee CRM-yada halkaas ka jira waana mid ku habboon ganacsiyada yaryar badankood ee raadinaya xal CRM joogto ah.
Maaddaama ay tahay CRM ugu qiimaha badan suuqa, HubSpot wuxuu ku nool yahay ilaa buunbuunin. Tani waa ikhtiyaarka dhabta ah ee loogu talagalay bilowga iyo ganacsiyada yaryar ee leh miisaaniyad liidata. Waxay u oggolaaneysaa maareynta macaamiisha oo buuxda iyo falanqaynta xogta, iyo sidoo kale isdhexgalka Gmail ee gudaha CRM. Waxa ugu wada fiican, HubSpot wuxuu jaangooyaa qiimaha iyadoo loo eegayo xulashooyinka aad isticmaaleyso iyo xirmada aad dooratay.
Waxyaabaha yar ee aad si firfircoon u isticmaasho, ayaa yaraanaya waxaad bixin doonto dhamaadka bisha. HubSpot waa barxad weyn oo loogu talagalay raadinta xogta iyo maaraynta macaamiisha iyada oo aan la helin xulashooyin horumarsan. Si kastaba ha noqotee, tani waa hoos u dhac yar, maadaama inta badan xulashooyinka daba-galka iyo falanqaynta ay xoogaa aan loo baahnayn u ahayn ganacsiyada yaryar iyo kuwa koraya.
Haddii xaddidaadda 10-ka isticmaale aysan u noqonin arrin adiga kugu habboon, markaa Zoho wuxuu noqon karaa CRM-ka ugu fiican ganacsigaaga. Zoho waa CRM bilaash ah oo leh shaqeynta asaasiga ah ee CRM-yada horumarsan. Waxay u oggolaaneysaa maareynta macaamiisha, falanqaynta iyo taageerada iyada oo loo marayo adeegga adeegga UI.
Zoho waxaa lagu farsameeyay iibiyayaal maskaxda ku jira wuxuuna leeyahay awoodaha ciyaarta. Tan macnaheedu waxa weeye in kooxdaada iibka ahi ay abuuri karto jawi tartan bilowga ah oo ay ka shaqeeyaan hagaajinta midba midka kale. Zoho wuxuu bixiyaa awoodo horumarsan oo aad u sareeya iyo liistada isticmaaleha oo la balaariyay iyadoo lacag yar laga qaado bil kasta. Si kastaba ha noqotee, inta badan ganacsiyada yaryar iyo bilowguba waxay ka heli doonaan wax badan oo adeegsi iyo shaqeyn ku saabsan nooca bilaashka sidoo kale.
Ugu dambeyntiina, haddii maaraynta xogta iyo dabagalka macaamiisha ay tahay wax aad aad ugu baahan tahay, Highrise ayaa adiga kaa dabooli doonta. Adeegga waxaa lagu dhisay iyada oo maskaxda lagu hayo keydinta xogta ku saleysan daruuriga, taas oo macnaheedu yahay in macaamil kasta oo macaamil ah si badbaado leh loogu keydiyo CRM.
Highrise waxay u shaqeysaa wax badan si lamid ah aaladaha maareynta mashruuca iyo buugaagta shaqsiyadeed, laakiin CRM weecinaysa Taas macnaheedu waa in isdhexgalka uu nadiif yahay oo sahlan yahay in lala qabsado. Xitaa waad maamuli kartaa liistada emaylkaaga oo aad farriimaha ugu gudbin kartaa macaamiishaada adoo adeegsanaya Highrise adigoon adeegsan boostada adeegyada otomatiga ah. Haddii aad raadineysid maareynta xogta iyo aaladda raadraaca ee meheraddaada, ha u dhaafin Highrise.
CRM-gaaga ayaa loogu talagalay Macaamiishaada
Ka fikir macaamiishaada iyo isdhexgalkaaga wadajirka ah markaad dooranayso barnaamijkaaga CRM. Maxay yihiin dhibaatooyinka aad hadda la kulantid oo aad jeceshahay inaad kaa yareyso? Su'aashan fudud waxay mararka qaar noqon kartaa dhammaan dadaalka aad u baahan tahay inaad ku maal gasho xalka CRM.
74% adeegsadayaasha CRM waxay sheegeen inay heleen macluumaad faahfaahsan oo macaamiisha ka dib maalgashi ay ku sameeyeen CRM.
Adeegga Software CRMView
Looma baahna in gacanta lagu qabto maaraynta macaamiisha iyada oo xalal badan oo muuqaal-buuxa oo la awoodi karo halkaas ka jira. Qaado boodboodi iimaan ah oo isku day qalab cusub si aad u aragto haddii ay ku habboon tahay socodkaaga shaqo ee jira. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto natiijooyinka.
Tags: qallafsanganacsi macaamiishaGanacsade2copperCRMGmailgoogle suiteSaresida loosida loo doorto crm
Daniela McVicker waa blogger iyo qoraa madaxbanaan oo si dhow ulashaqeeya B2B iyo ganacsiyada B2C oo bixiya qorista buugaagta, nuqul qorista, iyo adeegyada qormooyinka ghostwriting. Xilligan, iyadu waxbay ku darsataa Dulmarka qoraalka. Marka Daniela aysan wax qorin, waxay jeceshahay inay safarto, aqriso jacaylka iyo sheekooyinka sayniska, iskuna daydo khamri cusub.
COVID-19: Macaamiisha iyo Istaatiyada Iibsiga #StayAtHome